သက်တန့်ချို: သိပ်နာသွားသလား သူငယ်ချင်းရယ်
မနေ့က ညီမလေး ဖတ်ဖို့ အပိုင်း (၈) ထဲမှာ စင်ကာပူက မြန်မာတွေအကြောင်း ကျွန်တော်ထည့်ရေးမိတော့ ချက်ချင်း ပဲ မေလ်းထဲကို စာပြန်ဝင်လာပါတယ် ။ စင်ကာပူက စာဖတ်သူတစ်ဦးဆီကပါ ။ တချို့ အရာတွေ ကိုတော့ လက်ခံတယ် တချို့အရာတွေကိုတော့ လက်မခံပါဘူး စသဖြင့်ပေါ့ စင်ကာပူက သူတို့ရဲ့ ဘ၀တွေ အကြောင်း စာလုံးတွေပေါင်းပြထားတာ စာအရှည်ကြီးပါပဲ ။ ပေးပို့သူရဲ့ privacy အရ စာကိုပြန် လည်မဖော် ပြတော့ပါဘူး ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာက စင်ကာပူရောက်မြန်မာအားလုံးကို မရည်ညွှန်း ပါဘူး အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေကို ခွဲခွာပြီးတနယ်တကျေးမှာ ရောက်ရှိနေသူရဲ့ ဘ၀ကို ကျွန်တော် နားလည်စာနာပါတယ် ။ တချို့သော မြန်မာဖြစ်ရမှာ ရှက်တဲ့သူတွေကိုသာ အဓိက ထားရည် ညွှန်းပြော ချင်တာပါ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စာကိုဖတ်ပြီး အထင်လွဲသွားပုံရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် စာကြောင့် ဒါဏ် ရာတွေများရသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်က ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်နဲ့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ် ။ စင်ကာပူရောက်ရွှေမြန်မာများ အေးချမ်းသာယာပါစေး)
တို့တွေ . . . ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်မှန်းမသိ
“ လမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့မယ် ” လို့တော့
စကားတစ်ခွန်းနဲ့တင် လူကို သေစေနိုင်သတဲ့
ကမ္ဘာကြီးအပေါ် . . . . . .
သူတို့ကိုယ်သူတို့ “ ပညာတတ်” ဘွဲ့ခံယူထားသူတွေရဲ့အလယ်
ဘာအကြောင်းေ ကြာင့် နဲ့ မှ . . . .
ဘာတွေ လုပ်နေကြသလဲဆိုတာက ပိုအရေးကြီးတာပါ
အဖြေမဲ့နေခဲ့ကြရ . . . . .
သိပ်များ နာသွားသလား သူငယ်ချင်းရယ်
တစ်နေ့တစ်နေ့ ငါတို့ ဆုံးရှုံးနေကြရတယ်
တွင်တွင်ပြောဆိုနေကြ . . .
“ ကြမ်း ” က ပရမ်းပတာ ဖြစ်ရမတဲ့လား
ဟင့်အင်း . . . .
တချို့ တချို့ သော . . .
အသားထဲကထွက်တဲ့ “ လောက် ” ကောင်တွေကို ထိစေချင်တာပါ
မြန်မာဖြစ်ရမှာရှက်တဲ့ “ သစ္စာဖောက်” တွေကို သိစေချင်တာပါ
တချို့သော . . . တချို့သော . . .
ငါ့ကဗျာ . . စာသားတွေနဲ့ ဒါဏ်ရာတွေကုသ
ချမ်းမြေ့ခြင်းတွေ မုချ ရရှိပါစေကွယ် . . .
နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့
chocolatecupidlay November 12, 2011 at 3:24 PM
Anonymous November 13, 2011 at 4:13 AM
စာရေးကောင်းတယ် ဆိုတာထက် မှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေမှာ ရပ်တည်ပြီးအပြုသဘောမျိုးရေးတာ ကိုပိုကြိုက်တယ်
ဟုတ်တယ် ဝမရှိဘဲဝိလုပ်တယ်ဆိုတယ် စကားဆင်းသက်ပုံကို သေချာဇစ်မြစ်မလိုက်တတ်ပေမဲ့ တချို့ဗမာတွေ တော်တော်များများ အပြင်မှာတွေနေရတယ် မထိစပ်တာ စိတ်ချမ်းသာပေမဲ့တိုင်းပြည်အတွက်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့ ရေးချင်တာရေးသွားပြီ ညီလေးရေ
ဆူးသစ် November 13, 2011 at 10:42 AM
ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ရှင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်(ကျွန်တော့်၊ဇနီး)အတွက်ရယ်၊မိဘတွေအတွက်ရယ်ဒီလိုပဲနိုင်ငံခြားမှာလုပ်နေတာပါ။ ကျွန်တော့်နိုင်ငံကိုချစ်တာအမြဲပါ။ ၀န်ထမ်းခြောက်နှစ်ကျော်လုပ်ပြီးမှရှေ့ ရေးအတွက်စလုံးကိုထွက်ခဲ့တာပါ။ဒီနေ့အထိလည်းပျော်လို့နေတာမဟုတ်ပါဘူး။နေသင့်လို့နေတာပါ။အီးမေးလ်ရေးသူ ဘာရေးလည်းတော့မသိပါဘူး။ကိုသက်တန့်ချိုရဲ့ညီမလေးဖတ်ဖို့ကိုဖတ်ပြီးသူနာချင်နာမယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်သဘောပေါက်မိပါတယ်။ကျွန်တော်အဲဒါတွေတောတော်ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီမှာကတော်တော်ဆိုးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းတစ်ကိုယ် ကောင်းဆန်ပြီးနေနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ကိုသက်တန့်ချိုရဲ့ကဗျာကို နားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကနိုင်ငံခြားနေတိုင်း တိုင်းပြည်မချစ်လို့ချည်းပဲထင်နေလို့ပြောပြတာပါ။ ခင်ဗျားရဲ့စေတနာကိုလူငယ်ဆောင်းပါးတွေရေးနေဆဲ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။သဘောလည်းပေါက်ပါ တယ်။တစ်ခါတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကျွန်တော်လည်းစာထဲကပဲ အသိပေးနေရတာပါပဲ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးသူမှာစေတနာရှိရင်အဲဒီစေတနာကိုစာဖတ်သူအသိအမှတ်ပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးစရာရှိတာကိုတော့ဆက်ရေးပါ။
rose November 13, 2011 at 4:46 PM
Very good poem. I love it. I'm always proud to be Burmese. Even though one cannot participate to develop his/her country, then one should try the best situation for his/her life by educating oneself and gettingagood job. At least that person can help his/ her family and no other people can look down on our Burmese people. Take our own responsibel for our lives.
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် November 13, 2011 at 7:13 PM
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေဆိုတော့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကွယ်။ ကိုယ့်အမြင် သူ့အမြင် တူချင်မှ တူမှာလေ။
နန်းသက် November 14, 2011 at 10:01 PM
ဒီမှာလဲတချို့ ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်သားပြောရမှာကိုပဲရှက်သလိုလို။ တချို့ ကျတော့လဲ မြန်မာပြည်သားပြောရင်သူတို့ ကိုမြန်မာလူမျိုးလို့ အထင်မခံချင်တာတွေတွေ့ ရတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ စေတနာကတော့ လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပေမဲ့ လူတိုင်းတော့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ ရသွားတဲ့သူတွေရှိနေရင်ပဲ ရေးရကျိုးနပ်ပြီထင်ပါတယ်။
စန္ဒကူး November 15, 2011 at 9:58 AM
ရောက်တယ် ကို သက်တန့်ရေ..
မိုးသူ(တောင်ကြီး) April 29, 2012 at 12:24 PM
ကျွန်တော်ရဲ့ ကဗျာဆိုလိုရင်းကိုသဘောမပေါက်ရှာကြဘူးထင်ပါရဲ့ 
ရန်တောင်အတွေ့ ခံရတယ် ... တခါတလေများ
စေတနာ နဲ့ ရေးလိုက်တာ သရော်တယ်ထင်သွားကြသလားမသိပါဘူး